Tsy Hampihena Velively Ny Isan’ny Tovovavy Mitondra Vohoka Ao Tanzania Ny Fanakànana Ireo Reny Tsy Hiverina Any An-Tsekoly Indray · Global Voices teny Malagasy
However, Tanzanian President John Magufuli thinks it will.
Voadika ny 29 Aogositra 2017 12:18 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Swahili, Português, Français, 繁體中文, 简体中文, Italiano, English
Naka ny sary: PesaCheck.org
Nivoaka voalohany indrindra tao amin'ny PesaCheck.org, tranonkala mpitatitra ny zava-misy rehetra ao Afrika Atsinanana ity lahatsoratra ity.
Nanao fangatahana ny filoham-pirenena Tanzaniana, John Magufuli, mikasika ireo reny tanora nitondra vohoka fony izy ireo mbola tany am-pianarana, aminy dia tokony ho sakanana tsy avela hiverina any am-tsekoly intsony izy ireo rehefa avy niteraka.
Namory ny olona ary nanao fanambaràna tao Chalinze, tanàna kely iray tany amin'ny faritra atsinanan'i Pwani, ny filoham-pirenena Magufuli, nanameloka ny ONG iray ao Tanzania mamporisika ireo reny tanora mba hiverina any an-tsekoly, tamin'ny filazany fa “manimba ny firenena” izy ireo ary mitarika ny “fahasimban'ny toe-tsain'ny mponina” ao Tanzania:
Raha bevohoka ny zazavavy iray, na natao fanahy niniana izany na tsia, ka miteraka ary miverina any an-tsekoly indray avy eo, dia toa mampianatra ny zazavavy sasany hieritreritra hoe mety izany. Bevohoka indray ireny vehivavy ireny avy eo, miteraka ary miverina mianatra indray. Dia mbola miverina fanintelony io trangan-javatra io. Sa mampianatra Ray aman-dReny isika?
Nampian'ny filoham-pirenena hoe raràna tsy hiverina hianatra any an-tsekoly intsony ireo reny mbola tanora izay mianatra eny amin'ny sekoly ambaratonga voalohany na faharoa rehefa avy niteraka:
Te-hilaza amin'izy ireo, sy ireo ONG ireo aho hoe mandritra ny fotoana hitondrako firenena, dia tsy hisy na zazavavy iray aza ho avelako hiverina hianatra any an-tsekoly indray rehefa avy niteraka .
Hoy ny filoha nanohy izany: afaka mandeha any an-kafa ireo reny tanora ireo raha mbola te-hanovo fahalalàna, ohatra any amin'ny Manampahefana momba ny Fanabeazana sy ny Fampianarana asa ireny na koa miditra amin'ny sehatry ny fambolena.
Niteraka hatezerana maro tany anatin'ny haino aman-jery sosialy izany, narahana fampiasàna ny tenifototra #ArudiShule (miverina an-tsekoly) nataon'ny vahoaka Tanzaniana mba hanakianana io hetsika io, nalaina ho ohatra tamin'izany ireo zazavavy Tanzaniana miisa 8.000 mahery isantaona izay niato tamin'ny fianarana noho izy ireo nitondra vohoka araka ny tatitra iray nataon'ny Vondrona Miady ho an'ny Fanajàna ny Zo Mahaolona (Human Rights Watch).
Noho izany, ny fanontaniana mipetraka dia ity, mamporisika an-kolaka ny mpianatra sasany hieritreritra fiterahana ve ireo efa reny nefa mbola manohy ny fianarany ireo?
Nitady ny valin'io fanontaniana io i PesaCheck , miaraka amin'ny fandraisana ny fanampian'i Twaweza, Vondrona mitsinjo ny tombontsoan'ny mponina ary hitany fa TSY MITOMBINA io fanambaràna nataon'ny Filoha Maguful io noho ireto antony manaraka ireto:
Ny anton'ny mahabevoka ireo tovovavy
Tafakatra ambony eo amin'ny 27% eo ny tahan'ny zazavavy mitondra vohoka any amin'ny tanin'i Tanzania raha ny fomba fijerin'i Vondrona Mpanao karoka momba ny Fahasalamana sy ny demografika (THDS) 2015–16 . Inona no antony mahatonga an'io tarehimarika io?
Nisy lahatsoratra iray nosoratan'i HakiElimu izay nitatitra ny fomba fijerin'ny mponina momba ny antony mahabevoka ny zazavavy, ka voatanisa tao anatin'izany ny fidirambola ao an-tokantrano izay kely dia kely. Manamarina izany io lahatsoratra io amin'ny filazàna fa tafakatra efa ho 31% amin'ireo mpamaly (ao anatin'izany ny Ray aman-dReny sy ny tanora zazavavy) no nieritreritra fa ny tena antony lehibe dia ny haratsin'ny toekarena ka mahatonga ny Ray aman-dReny hampanambady ny zanany satria tsy vitan'izy ireo intsony ny manatanteraka ny filàn'ireo zanaka vavy.
Ny tatitry ny THDS ihany koa dia maneho fa miovaova arakaraky ny toekarena ny tahan'ny fahafahana miteraka, midina miaraka amin'ny fitombon'ny harena ao an-tokantrano. Somary taratara vao miteraka ny zanany voalohany ireo vehivavy manan-karena nisafidy ny hikarakara tokantrano, izany hoe ny vehivavy mahantra nisafidy ny hikarakara tokantrano izany matetika no miteraka tanora, amin'ny taona tokony mbola handehanany any an-tsekoly mihitsy.
Ho fanamarinana io voalaza io, nanao tatitra ny UNICEF hanehoana fa tanora zazavavy 15-19 taona, iray amin'ny enina, no manambady ao Tanzania. Lasa voa ny sain'ireo zazavavy ireo, ka maro amin'izy ireo no tsy mahavita mianatra intsony raha toa ka efa nijanona.
Antony iray hafa voalaza ao anatin'ny lahatsoratr'i HakiElimu “ny tsy fahampian'ny fanabeazana nomena ireo tanora zazavavy sy ny fanirian'izy ireo manokana”. Tsapan'izy ireo fa misy Ray aman-dReny sasany tsy mba manokana fotoana amin'ny fananàrana sy fampianarana ny zanany. Ny zavatra hita ihany koa dia ny tsy fahampian'ny torohay momba ny firaisana ara-nofo sy ny fiterahana izay afaka manampy ireo tanora hahafantatra amin'ny antsipirihany mikasika ny fahamaotinana. “Maro ireo Ray aman-dReny any am-bohitra no tsy mba miresadresaka momba izany amin'ny zanany vavy izay efa matoy.” Nanaporofo izany ny tahirin-kevitry ny TDHS tamin'ny taona 2015 izay maneho fa mihoatra ny antsasaky ny vehivavy no efa nanao firaisana ara-nofo talohan'ny faha-16 taonany.
Nahatsapàna antony anankiray hafa mahatonga an'io ihany koa ny tatitra nataon'i HakiElimu: hoe ny hajan'ny ankizivavy iray dia ny manambady sy lasa reny.
Ny tatitry ny DHS tamin'ny taona 2015–16 dia maneho fa misy ifandraisany be amin'ny fari-pahaizana ny tahan'ny fiterahana. Izy io dia milaza fa avo 3.3 heny amin'ny isan'ny zanaka ananan'ny vehivavy nahavita fianarana teny amin'ny ambaratonga faharoa ny an'ny vehivavy tsy nandia fianarana ambaratonga faharoa. Ary avo 5 heny ny risika hahabevoka ny tanora zazavavy tsy nianatra raha ampitahaina amin'ireo zatovo vavy nahavita fianarana teny amin'ny ambaratonga faharoa na teny amin'ny ambaratonga ambony. Raha araka ny tatitry ny UNICEF (pejy.12) dia nahita ny tatitra TDHS 2010 fa ny ankamaroan'ireo zazavavy miteraka izay sady “mbola zaza izy tenany” no tsy mianatra avokoa.
Mandrisika an-kolaka ny zatovo vavy hitondra vohoka ve ireo reny mbola mpianatra?
Raha ny voalazan'ny THDS, 8% fotsiny ny tahan'ny isan'ny zazavavy tanora mitondra vohoka ao an-tanànan'i Zanzibar raha oharina amin'ny tanànan'i Tanzania. Tamin'ny taona 2010, nandray politika fiverenana an-tsekoly i Zanzibar hanenana ny tahan'ny fandaozana sekoly. Tafiditra anelanelan'i Tanzania sy Zanzibar i Kenya satria dia 18% ny tahan'ny zatovo vavy bevohoka ao aminy. Any amin'ireo toerana roa ireo, dia mbola mahazo mankany am-pianarana avokoa ireo reny mbola mpianatra, hany ka somary ambany ny tahan'ny zatovovavy mitondra vohoka.
Noho izany, TSY MITOMBONA velively ny filazàna fa misy fiantraikany eo amin'ny toetsain'ny mpianatra sasany ny fiverenan'ireo reny hianatra any an-tsekoly ka mampiakatra ny isan'ny tanora zazavavy mitondra vohoka. Ny ankamaroan'ny valin'ny fikarohana natao manodidina ny resaka tanora zazavavy mitondra vohoka dia izao: miankina amin'ny toekarena sy ny fiarahamonina iainany ary ny fampianarana ny zazavavy ny isan'ny tanora bevoka.
Tinareo ve ny hitadiavanay porofo hanamarinana ny zavatra nambaran'ny mpanao politika iray na olona manam-pahefana iray mikasika ny volam-panjakana? Fenoy ity taratasy ity, na mifandraisa amin'ny iray amin'ireo olona voasoratra etsy ambany ireo, ary hanampy anareo izahay tsy ho voarebireby saina momba izany.
Nosoratan'i Mwegelo Kapinga, miasa ao amin'i PesaCheck ity tatitra ity, izy dia mpanolotsaina amin'ny resaka fampandrosoana, mpikaroka sy mpanoratra ihany koa izy. Mpandalina ny karoka natao, taloha tao Afrika Atsinanana,Twaweza i Mwegelo. Ny sary torohay dia nataon'i Brian Wachanga, izay Keniana teknolojista sivily, liana amin'ny fanehoana an-tsary ny tahirin-kevitra ary miasa ao amin'ny vohikala PesaCheck . Navoakan'i Eric Mugendi , Filoha mpamoaka lahatsoratra ao amin'ny vohikalan'i PesaCheck ity tatitra ity
Ny PesaCheck, izay noforonin'i Catherine Gicheru, dia vohikala iray voalohany mpanamarina ny zava-mitranga voalaza rehetra ao Afrika Atsinanana. Natao hanampy ny vahoaka hahay hanavaka ny zava-misy marina sy ny eritreritra fotsiny mandritra ny fanambarana atao eny imasom-bahoaka mikasika ireo tarehimarika izay mamolavola ny tontolontsika izy, tsindriana manokana amin'izany ny fanambaràna imasom-bahoaka momba ny volam-panjakàna izay eritreretin'ny governemanta fa ‘Tanjona ho amin'ny Fampandrosoana Maharitra’ na ny asa fanampian'ny Fanjakàna SDG, toy ny fitsaboana, fampandrosoana ny any ambanivohitra ary ny fahazoana rano / zavatra ara-pahasalamana. Mandinika ny fahamarinan'ny tatitra voalazan'ny media ihany koa ny PesaCheck. Raha mbola te-hikaroka mombanà tetikasa hafa ianao dia tsidiho ny pesacheck.org.